मर्दको खेल जनानीको सान ! - Birgunj Photo Project
मर्दको खेल जनानीको सान !
कुस्ती खेल मधेसको सान हो । पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्दै गएको यस खेलमा मधेशका चेलीहरुको समेत सहभागितामा वृद्धि हुदैँ गएको छ ।
तराईको रौतहट, बारा, पर्सा, सप्तरी लगायतको जिल्लामा पछिल्लो समयमा प्रतियोगिता गराउनेहरुको समेत वृद्धि हुदैँ गएको छ । पर्साको पोखरीया नगरपालिकाको जिल्ला उचाङ्गग उच्च माध्यमिक विद्यालयमा एक स्थानीय नेताद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा के युवा के बुढा संगसंगै महिला कुस्तीबाज हरुको पनि कडा प्रतिष्पर्धा थियो । पहिलो पटक छिमेकी देश भारत विहारको गयाबाट सहभागिता जनाएकी शिवानी कुमारी भने नेपालका महिला कुस्ती खेलाडीहरु पनि निकै बलिया हुने गरेको प्रतिक्रिया दिईन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी बांकेकी धनमन्ती यादव नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाएकी उनले हार स्वकारीनन् अन्तत दबैले अंक बाडेका थिए ।
थोरै लगानीमा स्तरीय प्रतियोगिता गर्न सक्ने भएपनी खेलतर्फ सरकारको अझैसम्म ध्यान नगएको बरिष्ठ कुस्ती खेलाडीहरुको आरोप छ । थोरै पुरस्कार राशी भएपनी सिमावारी नेपालमा आयोजना हुने कुस्ती खेलाडीहरुमा भारत विहारको गाया, गोरखपुर, बनारस, जैयपुर, पटना, झारखण्ड लगायतको खेलाडीहरुको उल्लेख्नीय उपस्थिति रहने गर्दछन् तरपनी यस खेलप्रति सरकार जहिले पनी उपेक्षा गरिरहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मानदेव हजाराको गुनासो छ ।
उनले भने, २०१९ मा साउथ एशियन प्रतियोगिता हुने खेल नेपालमा हुन लागेको छ, त्यसको तालिम वीरगंज रंगशालामा हुदैँछ, अन्तराष्ट्रिय स्तरकै गोल्ड मेडलिष्ठ ८ जना मात्रै छन् । तिनिहरु प्रायः तराईकै जिल्लाबाट हुन् यस खेल तराईको सान कै रुपमा भएकाले महिला कुस्तीहरुलाई पनि उनिहरुले उत्प्रेरणा जगाएका छन् । अध्यक्ष हजराले भने, जुन अख्डा (कुस्ती खेल्ने मैदान) मा पुरुष खेलाडीहरु खेल्थे ति अखडामा अहिले महिला खेलाडीहरु लड्न थालेका छन् । यदी यस खेललाई प्रवद्र्धन गर्दै जाने हो भने यस खेलको भविष्य नेपालमा राम्रो छ ।